डिजाइन र डेकोरका लागि अग्रस्थानमा इन्टेरियर पोइन्ट, बढ्दै इन्टेरियर अाकर्षण-Setoghar
डिजाइन र डेकोरका लागि अग्रस्थानमा इन्टेरियर पोइन्ट, बढ्दै इन्टेरियर अाकर्षण
कस्ताे छ इन्टेरियर बजार, के छन् सम्भावना ?
चन्द्र हुमागाई प्रबन्ध निर्देशक इन्टेरियर पोइन्ट्स प्रा.लि
करिब ५ हजार रकम लगानी गरेर व्यवसाय शुरुवात गरेका हुन् चन्द्र । ५ हजारको लगानी शुरु गरेको व्यवसाय अहिलेको अवस्थामा आउन सक्ला भन्नेमा चन्द्र आफैं विश्वस्त थिएनन् । यद्यपि निरन्तरको पहल एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वास, व्यवस्थापकीय क्षमता र प्रतिवद्धताको साथ अघी बढिरहँदा त्यो सफलता प्राप्त भएको चन्द्र बताउँछन् । आफ्नो व्यवसायले छोटो अवधिमा नै राम्रो फड्को मार्न सकेकोमा चन्द्र दङ्ग छन् । हाल चन्द्र्र संलग्न रहेको इन्टेरियर पोइन्ट नेपालका इन्टेरियर कम्पनीहरु मध्ये अग्रस्थानमा छ ।
कस्तो कम्पनी हो इन्टेरियर पोइन्ट ?
इन्टेरियर पोइन्ट हाल सम्म डिजाइन तथा डेकोर लगायतका कामहरु गर्दै आएको कम्पनी हो । यी दुवै कामहरु एकैसाथ अघी बढाएको कारण यो कम्पनी बजारमा राम्रो छाप पार्न सफल भएको छ । व्यवसाय शुरुका दिनमा कम मुनाफामा नै भएपनि भविष्यलाई व्यवसायलाई राम्रो तवरले काम गरेको कारण अहिले यो अवस्थामा आउन सफल भएका हुन् चन्द्र । नेपालमा अहिले इन्टेरियरको बजार निकै नै बढेको छ । राम्रो तवरले काम गर्ने हो भने बजारमा सहजै काम गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा नयाँ पुस्ता सँगै मानिसहरुको चाहना पनि बढेर जाने अवस्था छ । जसले गर्दा बजारमा छोटो समयमा नै नयाँ नयाँ डिजाइनको लागि मानिसहरुको अनुरोध आउने गरेको छ । यसले गर्दा व्यवसायमा रहेर काम गर्न सहज हुने चन्द्रको अनुभव छ । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने क्रममा बजारमा माग अत्यधिक बढेको छ ।
व्यवसाय शुरु गर्दा निकै कम रकमबाट इन्टेरियर व्यवसायमा प्रवेश गरेका हुन् चन्द्र । यद्यपि विदेशमा रहँदा सिकेको सीप र अनुभव नै अहिलेको व्यवसाय विस्तारको आधार बन्यो । करिब ५ हजार रकम लगानी गरेर व्यवसाय शुरुवात गरेका हुन् चन्द्र । ५ हजारको लगानी शुरु गरेको व्यवसाय अहिलेको अवस्थामा आउन सक्ला भन्नेमा चन्द्र आफैं विश्वस्त थिएनन् । यद्यपि निरन्तरको पहल एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वास, व्यवस्थापकीय क्षमता र प्रतिवद्धताको साथ अघी बढिरहँदा त्यो सफलता प्राप्त भएको चन्द्र बताउँछन् । आफ्नो व्यवसायले छोटो अवधिमा नै राम्रो फड्को मार्न सकेकोमा चन्द्र दङ्ग छन् । हाल चन्द्र्र संलग्न रहेको इन्टेरियर पोइन्ट नेपालका इन्टेरियर कम्पनीहरु मध्ये अग्रस्थानमा छ । इन्टेरियर क्षेत्रमा कामको चाप निकै नै बढेको चन्द्र बताउँछन् । पछिल्लो समय आफ्नो व्यवसायमा लगानीकर्ताको रुपमा हाल आफ्ना भान्जालाई समेत भित्र्याएका चन्द्र हुमागाईंले इन्टेरियर क्षेत्रमा भविष्य उज्ज्वल देखेका छन् ।
हाल करिब १० जनालाई रोजगारी सृजना गरेको यस इन्टेरियर पोइन्टको अलावा आगामी दिनमा व्यावसायिक विविधिकरण योजनामा समेत पुगेका छन् । नेपालमा काम गर्नको लागि राम्रो सम्भावना भएको बताउने हुमागाईं हरेकमा कुनै न कुनै सीप र प्रतिभा हुनुको अलावां आफूमा विश्वास भने हुनैपर्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो समय कर्पोरेट कम्पनी र युवा पुस्ताको मात्र चाहनाको क्षेत्र नभई अब इन्टेरियर क्षेत्र विस्तारै सबै वर्ग र स्तरका मानिसहरुको चासोको क्षेत्र बन्दै गएको हुमागाईंले बताए । हाल आफूले अटोमेटिक प्रविधिमा आधारित मेसिन सहितको कारखाना समेत सञ्चालन गरेका चन्द्र्रले सञ्चालन गरेको इन्टेरियर कम्पनीको लगानी हाल ३ करोड भन्दा माथि पुगेको छ । सोहीबमोजिम आफ्नो कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी नेपालका ७ ओटै प्रदेशमा सेवा केन्द्र (शाखा) विस्तार गर्ने योजनामा आफू रहेको चन्द्र बताउँछन् ।
ग्राहकको चाहनामा आएको परिवर्तन
पछिल्लो समय मानिसहरुको चासो बदलिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अगेनामा आगो बाल्ने प्रचलन हट्दै गएको छ । मोडुलर किचन लगायतका प्रविधिमा आधारित आधुनिक उपकरणमा मानिसहरुको आकर्षण निकै नै बढेको छ । सोही बमोजिम आफ्नो कम्पनीलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्दै लैजाने तथा आधुनिक डिजाइनहरु थप गर्दै लैजाने योजनामा आफू रहेको समेत बताउँछन् चन्द्र ।
अबको बजार र चुनौती
अहिले बजार निकै नै प्रतिष्पर्धी छ । यद्यपि अहिलेको लागि ठूलो चुनौती भनेको गुणस्तरहीन चिनियाँ फर्निचर नेपाली बजारमा भित्रनु हो । यस्ता फर्निचरले तत्काल ग्राहकलाई आकर्षित नै गरेपनि दिगो र भरपर्दो भने नहुने भएको कारण गुणस्तरीय फर्निचर प्रयोग सम्बन्धमा प्र्रयोगकर्ताहरुलाई जागरुक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सस्तो र हलुका हुने यस्ता फर्निचरमा कमसल सामाग्रीहरु प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन र तालिम
अहिले नेपालमा इन्टेरियर क्षेत्रको शैक्षिक कार्यक्रम समेत शुरुवात भएको छ । साथै यस क्षेत्रको अध्ययन गराउने छोटो अवधिका तालिम समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रमा नयाँ आउने व्यक्तिहरुलृ राम्रो शैक्षिक ज्ञान पाउने हुनाले पुराना व्यक्तिको तुलनामा राम्रो तवरले काम गर्न सक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा कामलाई गुणस्तरीय, सहज र सुलभ बनाउन समेत सहयोग पुगेको छ । पुराना व्यक्तिहरुले स्केचअपको प्रयोगबाट डिजाइन सम्बन्धी काम गर्दै आएका भएपनि नयाँ आउने व्यक्तिहरुले आधुनिक प्रविधिमा आधारित म्याक्सबाट डिजाइन गरिरहेका छन् ।
काभ्रेको कुसादेवीमा मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका चन्द्र हुमागाईं हाल इन्टेरियर क्षेत्रमा राम्रो पहिचान बनाउन सफल व्यक्ति हुन् । लामो समय दुवईमा रहेर इन्टेरियर सम्बन्धी कामलाई नजिकबाट सिक्ने अवसर पाएका हुमागाईं सोही बमोजिम आफूले विदेशमा रहँदा सिकेको सीप नेपालमा नै प्र्रयोगमा ल्याउने मान्यता सहित आफैंले इन्टेरियर पोइन्ट सञ्चालन गरेका हुन् । विदेशमा रहँदा डेनमार्कको डेनिस कम्पनीमा काम गरेका उनी हाल नेपालमा नै रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले नेपालमा फर्किएर आफ्नै व्यवसाय अघी बढाएका हुन् । नेपालमा रहेर पनि झण्डै देढ दशक देखि यस क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आएका हुमागाईंले अहिले सम्म नेपालका थुप्रै ठूला प्रोजेक्टहरु समेत सम्पन्न गरेका छन् । नेपालमा व्यवसाय शुरु गर्दा शुरुमा २ बर्ष निकै गाह्रो अनुभव गरेका हुमागाई अहिले भने इन्टेरियर क्षेत्रमा सबै माझ सुपरिचित छन् । पछिल्लो समय मानिसहरुको चाहना बदलिएको बताउँछन् हुमागाईं । कुनै काम एक जना व्यक्तिलाई दिएपश्चात् सबै काम सोही व्यक्तिबाट नै हुन सकोस् भन्ने मान्यता अहिले धेरै व्यक्तिमा रहन्छ । सोहीबमोजिम ग्राहकको चाहनालाई ध्यानमा राखी इन्टेरियरको अलावा निर्माण सम्बन्धी काम पनि अघी बढाएका छन् हुमागाईं ।